Ahoana ny fomba hamoronana kaonty Gmail? ▷ ➡️ mpanaraka ▷ ➡️
Ahoana ny fomba hamoronana kaonty Gmail?
Enga anie 12, 2021 0 fanehoan-kevitra 690
Gmail dia iray amin'ireo sehatra malaza indrindra, mora apetraka sy ampiasaina. Ao amin'ny Gmail, ny tsara indrindra amin'izany rehetra izany mba hisoratra anarana ny kaontinao vaovao dia tsy andoavam-bola fanampiny.
Mamorona kaonty Gmail Tombony sy mahasoa ho an'ny fampiasanao azy io, satria mamela anao ho tompon'ny orinasanao manokana, mpiara-miasa aminao akaiky indrindra, mandefa sy mandray mailaka amin'ireo mpandray tianao, mifampiresaka erak'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny chat, antso an-tsary hatramin'ny olona 100. miaraka amina sarin-tsary miampy dikanteny sy efijery zaraina, alamino ny fampahalalana rehetra tadiavinao ao anaty boaty ary ny hafa.
Gmail dia sehatra tsotra ary mora apetraka amin'ny fitaovana rehetra satria misy amin'ny iOS sy Android fitaovana sy solosaina rehetra.
Mamorona kaonty Gmail mila manana kaonty Google vaovao ianao ary kaonty Gmail iray monja amin'ny kaonty Google tsirairay.
Ahoana ny fomba hamoronana kaonty Google vaovao sy ny kaonty Gmail vaovao anao?
Midira ao amin'ny google.com
Manomboka amin'ny Efijery fikarohana Google.
Tsindrio ny bokotra Hiditra."
Kitiho ny rohy "Mamorona kaonty Google anao."
toerana ny anaranao ary ny Anaran'ny mpampiasa.
Manomboka amin'ny varavarankely izany "Mamorona kaonty Google anao"
Ao amin'ny saha "anarana" ampidiro ny solonanarana amin'ny kaonty Gmail anao vaovao.
Rehefa manoratra ny anaranao Azonao atao ny mampiasa litera, isa ary fe-potoana tsy kapitaly.
Ampidiro ny teny miafina ary tsy maintsy misafidy iray ianao hamoronana
Soraty ary hamafiso Tenimiafina.
Mampidira tenimiafina ho an'ny kaonty Gmail anao vaovao. (Tsy maintsy farafahakeliny litera 8 farafahakeliny.)
Efa manana ny teny miafinao ianao, soraty indray ary hamafiso indray. (Samy tsy maintsy marina ireo).
Apetraho ny daty nahaterahany.
toerana ny lahy sy ny vavy.
Ampidiro ny fampahalalana toerana sy fanarenana.
Hiditra In Ny nomeraon-telefaonanao.
Ampidiro ny Adiresy mailaka.
safidio amin'ny toerana misy anao ny toerana misy anao mitete-midina eo amin'ny sahan'ny Toerana.
Ekeo ny fepetra Google.
Efa manana kaonty vaovao ianao "Google" ary kaonty "Gmail" vaovao.
Ahoana ny fomba hanokafana ny kaonty Gmail anao aorian'ny namoronana azy.
Mandehana amin'ny efijery Google main.
Tsindrio ny bokotra ao amin'ny rohy Gmail.
Sokafy ny fotoanao avy amin'ny Gmail.
Soraty ny mailakao sy ny teny miafinao.
Ao anaty boaty no hahitanao hafatra avy amin'i "Tongasoa eto Google."
Hahita sary masina vitsivitsy ianao ny fomba ahafahanao manampy sary piraofilina, lohahevitra, fanafarana fifandraisana ary hafa.
Aorian'ny nahavitanao ny asanao tao amin'ny Gmail, kitiho bokotra "Fihaonana akaiky."
Mialà amin'ny kaontinao avy amin'ny Gmail.
Nianatra nanamboatra kaonty Gmail ianao, izao dia azonao atao ny mitantana sy mampiasa ireo fitaovana atolotry ity sehatra ity anao.
1 Ahoana ny fomba hamoronana kaonty Google vaovao sy ny kaonty Gmail vaovao anao?
2 Ahoana ny fomba hanokafana ny kaonty Gmail anao aorian'ny namoronana azy.
Endri-javatra mampiavaka an'i Gmail
Ahoana ny fanamboarana ny Gmail-nao?